यसरी पढ्ने बानी गर्नुहोस्, जसले गर्दा राम्रो नतिजा आउँछ ! – Fewa Times
जन्ती बोकेको बस दुर्घटना हुदा १७ को मृत्यु-‘गोरे’ का भार्इ रमेश पनि समातिए दुबईबाट-पानी माग्ने निहुँमा ८ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार-यस्तो चरम लापरबाही : अस्पतालको शौचालयमा जन्मियो शिशु-कस्तो समाज हो ? दलितलाई पानी खुवाएको निहुँ ६ वर्षदेखि गाउँ निकाला-एक महिना नपुग्दै उक्कियो कालोपत्रे, ठेकेदार भन्छन “यो व्यापार हो घाटा खादैन्न गएर उजुरी गर्नुहोस”-लामो समयदेखि अनशनरत गंगामायाले अनुपराज शर्माको हातबाट जुस पिउँदै तोडिन् अनशन (हेर्नुहोस् फोटो)-फेरि गयो नेपालमा शक्तिशाली भूकम्प-अनशन बसेका डा. केसीको श्वासप्रश्वासमा समस्या, बल गरेर भएनी उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइने-सुतिरहेको बेला पहिरो जाँदा भक्तपुरमा एकै परिवारका तिन जनाको मृत्यु
यसरी पढ्ने बानी गर्नुहोस्, जसले गर्दा राम्रो नतिजा आउँछ !
प्रकाशित मिति: February 4, 2018 9:55 am
माघ २१, काठमाडौं – लगातार लामो समय एउटै पाठ रटेर पढ्ने गर्नु हुँदैन । रटेरभन्दा पनि हरेक शब्दलाई कोडिङ गरेर पढ्नुपर्छ । यसो गर्दा मात्र सम्झन सजिलो हुन्छ ।जहिले पनि अध्ययन गर्दा शब्दलाई चित्रमा ढाल्नु प्रयास गर्नुपर्छ । यसरी पढ्दा हरेक कुरालाई फरक तरिकाले सोच्ने बानीको पनि विकास हुन्छ ।
कहिल्यै पनि निद्रालाई असर पुग्ने गरी अध्ययन गर्नु हुँदैन । शरीरलाई पूरा निद्रा आवश्यक हुन्छ । पूरा निद्रा नसुत्दा मस्तिष्कमा पनि खराब असर पर्न सक्छ । अलार्म प्रयोग गरेर उठ्ने बानी पनि बसाउनु हुँदैन ।
योगा र ध्यानले दिमागलाई तेजिलो बनाउँछ । एक घन्टा पढेपछि करिब २० मिनेट आराम गर्नुपर्छ ।
विद्यार्थीले पालुंगोको साग, बदाम, ओखरजस्ता खाद्यपदार्थकोे प्रयोग गर्नुपर्छ । जसले स्मरणशक्ति बढाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
सकेसम्म रातभन्दा बिहानमा पढ्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ । रातिको समयमा अक्सिजनको मात्रा कमी हुँदै जाने भएकाले पढेको सम्झन गाह्रो हुन सक्छ ।
पढ्दा यस्तो नगर्नुस्
– सकेसम्म जंकफुड, रेस्टुरेन्टका खाना, सुपारीलगायतबाट टाढै रहनुपर्छ । यस्तो खाद्यपदार्थले स्मरणशक्ति कमजोर बनाउँछ ।
– निरन्तर नपढ्ने र ३० मिनेट पढ्दा १० मिनेट आराम गर्नुपर्छ ।
– कहिल्यै पनि मोबाइल साथमा राखेर सुत्नु हुँदैन । यदि नेटका लागि राउटर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने अफ गरेर सुत्नुपर्छ ।
– ढाड सीधा गरेर पढ्ने गर्नुपर्छ ।
जन्ती बोकेको बस दुर्घटना हुदा १७ को मृत्यु
दलित भन्दै आफ्नै श्रीमानले छाडे, अहिले यस्तो बेहाल छ बच्चा र आमाको, आमा डाँको छोडेर रुँदै मिडियामा आईन (भिडियोसहित)
नेपाली महिलाका लागि ब्रिटिस आर्मीमा जागिर खुल्यो, कति चाहिन्छ भर्ति हुन् योग्यता र उचाई ?
राति सुत्दा केही थिएन, उठ्दा खेतमै भीमकाय विमान आएर बसेपछि गाउले झन्डै बिहोस भएनन्
हेर्दाहेर्दै कर्णालीको पुलबाट एक युवकले नदीको बिचमा हामफाले ! हेर्नुहोस भिडियोमा
तिब्बतको समुद्र सतहबाट ३९६२ मिटर उचाईँमा रहेको “माप्चोचोङ्गो” नामको हिमनदीबाट निस्केर मान सरोवर ताल......
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा २६ वटा गैँडा मरे
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न कारणले २६ वटा गैँडा मरेका छन् निकुञ्जका सूचना अधिकारी......
फेवाटाइम्स तुलसी मिडिया प्रा.लिद्वारा नेपाली भाषामा सञ्चालित अनलाइन समाचारपत्र हो ।
हरेक पलको समाचार सम्प्रेषण तथा विश्लेषण गर्दै पाठकहरुलाई सुसूचित गराउने हाम्रो उद्देश्य हो र सोही अनुरुप हामी काम गरिरहेका छौँ ।
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कला र खेलकुदका साथै मनोरञ्जनात्मक तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित गतिविधिहरुमा हामी विशेष जोड दिने गर्छौं। ताजा, निश्पक्ष र सन्तुलित खवर तपाईमाझ पुर्याउने काममा हामी सदैव लागिरहने छौँ ।
तुलसी मिडिया प्रा.लि, काठमाडौँ
सुचना विभाग दर्ता नं : १८०/ २०७३ - ०७४
अध्यक्ष : नवराज भण्डारी
सम्पादक : कविता भण्डारी
Fewa Times Online News Portal © 2016, Design By: www.ekumar.com.np